Halka laga helo khariidadaha Honduras - Geofumadas
Maarso, 2008 ArcGIS-ESRI, Cartografia
Badanaa dadku waxay raadinayaan kartoonka waddankooda, hay'adaha la xariira maamulka xuduudaha ee xayeysiinta, qashin-qaadka ama heerka wax-qabadka waxay badanaa leeyihiin meelo ay ku wadaagaan xogtooda. Xaaladdan waxaan kala hadli doonaa Honduras, sababtoo ah Google Analytics waxay sheegeysaa inay jiraan Honduran oo ku dhex yaala boggan sababo sidan oo kale ah, iyo sababta ay Alvarezhn ula wadaagaan Honduras, hehe.
Inkasta oo ay jirto xog badan oo ka jirta hay'adaha dawliga ah, meesha laga heli karo ... waxaana suurtogal ah haddii ay sii wataan koritaanka waa:
Nidaamka Macluumaadka Dhulka ee Territorialism (SINIT)
Tusaale ahaan Tani, in inkastoo ay abuurka waa la soo dhaafay ayaa u badan in ay bixiyaan mustaqbalka, sida hay'adda ee sharcigu oggol yahay isticmaalka dhulka si faafin macluumaad wadci oo xiiso guud oo keeni qaar ka mid ah guddiyada dhex Commission Data Interagency yahay Space (CIDES). Iyadoo miisaan ku filan iyo hoggaamiye ku filan oo ka mid ah hay'adaha wadaagga ah, waxay noqon kartaa gacanta midig ee daabacaadda ujeedooyinka Machadka National Geographic, halkaas oo ay jiraan waxyaabo farsamo iyo farsamo khaas ah oo heer gobol ah.
SINIT kama dhigeyso tusaale in la abuuro sawir gacmeed, laakiin taa bedelkeeda la xakameeyo ficillada "wada-hawlgalayaasha firfircoon" ee abuuraya isla markaana cusboonaysiiya xogta xadka. Muhiimada ugu weyni waa isla mida wadamo dhawr ah oo Latin Ameerika ah: ka fogaanshaha nuqulada maalgashiga dadweynaha ama kuwa gaarka ah ee aruurinta macluumaadka horey ujiray, kaas oo, hadii si wanaagsan loo isticmaalo, uu wadanka u horseedi karo maamul xuduudeed midaysan oo isku dhafan.
Inkasta oo SINIT ay ujeeddo u tahay Intranet ah wada-hawlgalayaasha firfircoon, qaar ka mid ah horumarka loo sameeyay shabakada waxaa laga heli karaa internetka. Qaar ka mid ah kuwa kale, buugga ayaa ku kaydiya xogta qaybaha soo socda:
Gaadiidka aasaasiga ah.
Physiography iyo Resources.
Kaabayaasha iyo Qalabka Bulshada.
Arimaha Bulshada iyo Dhaqaalaha.
Waa wax yar oo loo qaabeeyay (marka la eego esteemka) iyo dowlad ahaan sida caadiga ah waa laga joojiyay waqti ka waqti ama xiriiriyeyaashu waxa ay ina xusuusineysaa in aanu qofna adeegsanin adeegyo, laakiin waxaan rajeynayaa, inay sii socdaan. Marka aad dooranayso lakabka, (waa la filayaa) in khariidadu ay muujinayso qaab muuqaal ah, oo leh halyo iyo qaab.
In this ay joogsadaan, aan maxaa yeelay, iyagu ma sidaas daraaddeed boodi-bilaabi kartaa waxa aan u arkaa iyaga qaatay maalmo yar waxba ... oo in kastoo ay badan aan ka qaban yaraan ogolaanaya waxyaabaha aasaasiga ah ee adeegga ... iyo gaar layers degsado .shp si dhakhso ah.
Waxay leedahay qalabka asaasiga ah ee horumarinta ArcIMS, shaqaalaha yar laakiin qaababka ay u oggolaadaan in aad ku shuban layers more la button la soo dhaafay, oo loo hawlgeliyo info aasaasiga ah (inkastoo Faylasha geeyo) ... laakiin ma lumin si fiiro Download icon, sababtoo ah shaqeyntani waxaad soo dejisanaysaa lakabka muuqda ee laysku qurxiyo qaabka jajabka. Faylasha la fureen waxay leeyihiin .dbf, .shp iyo .shx; dhammaan jadwalkani wuxuu ku jiraa UTM Zone 16N WGS84 haddii aanad ka helin tixraaca maadooyinka.
Sidaas darteed haddii aad rabto xogta Honduras ee qaabka .shp, tani waa meesha. Iyada oo ah shirkad la talinta abbaaraha saddex bilood, hal abuur leh dhadhan wanaagsan iyo laba qof oo ah horumarinta dhexgalaan karaa layers kale (cadastral, raster iyo ordenamieto dhuleed) ... iyo caymiska noqon kartaa portal juqraafi wanaagsan oo la dhibay isagii ka maqan wadamada Hispanic.
Sidaa daraadeed waxaan ku dhiiri gelinayaa xayeysi ... haddii dhamaan wadamada ay sameeyeen dadaalkan waxaan fursad u heleynaa inaan ka baxno horumar la'aan. Waxaan sidoo kale qiray in ay fiicnayd in ay ku raaxaysato muuqaalkeeda, waxay sameysteen saaxiibo fiican waxayna qaadaan sawiro badan oo safarkayga ah iyada oo loo marayo magaalooyinkooda quruxda badan.
Qaar ka mid ah dedaaladan ayaa la iska daayay, 2010 waa lagu soo celiyay qaab dhismeedka Xoghaynta Qorshaynta, ka dibna waxaa sii wadi doona Agaasimaha Guud ee Maareynta Dhulka.
Sidoo kale bogga Cenrut waxaad ka heli kartaa Khariidadaha Honduras GPS iyo Bartamaha Ameerika.
Post Previous«Previous Horumarka koonfurta qaarada Google
Post Next Hoos u dhig khariidada dwg / dgnNext »
8 Jawaab in "Xaggee laga helaa khariidadaha Honduras"
Jacobo Borjas isagu wuxuu leeyahay:
Waa salaaman tahay, ma i siin kartaa lambarka si aad u codsato khariidad ama waxa howshu tahay in la raaco
RAILRIGUE CRISTIAN isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan codsanayaa caawimo si aan u helno khariidadda degmada ee ceguaca Santa Barbara
Dhab ahaantii, waxay u muuqataa in dayactir lagu jiro.
Ma jirto wax ka hadhay sugitaanka ama tagista hay'adda (Teguicgalpa, Honduras)
Edinson Felix Michu Osorio isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, isku day in aad gasho bogga internetka oo uu ku jiro dayactir, ayaa iga caawin karta inaan bixiyo macluumaad ku saabsan khariidooyinka ballaadhan ee Honduras. Waad ku mahadsan tahay
Waad ku mahadsan tahay waxtar!
JUAN BLAS ULLOAULLOA isagu wuxuu leeyahay:
Waa run waxa uu sheegaayo OLVINA waayo jeedo in la baro juqraafiga ee eduction waana nasiib-darro ah in xitaa on maps in ay yihiin on web waa la khaladaad ceeb iyo buugaagta Dis cusub siinayaa Xoghayaha Waxbarashada sidoo kale ka soo muuqan dilka juqraafi wasaaradda, qaran, gobol iyo caalami ah, oo tanuna waa xaqiiqda ah in halkii shaqaalaynta cartographers shaqaaleeyaan maps sawirka, ma in askari ayaa looga baahan yahay, laakiin taageero dhaqaale loo baahan yahay iyo xirfadeed haddii ay jiraan ee dalka, laakiin sida ay ma yihiin siyaasiyiinta, ma iyaga soo kiraystaan, iyo ugub gacanta wadci war kale, sababtoo ah waa NATIONAL SECURITY oo aan khariidado FUDUD: geopolitics ES.
iska ilaali murillo isagu wuxuu leeyahay:
IN Honduras kajirin Uruurinta aan rasmi ahayn, siyaasiyiintii gaarey keliya daryeel ah oo ku saabsan hagaya naftooda ka faa'iideysan.
HADDII UGU HOREYSAY IGNO, HADDII WAXYAALAHA GEOGRAPHICAL MA JIRA.
HORUMARKA KA QAYBGALAYNAYO ISKUULKA, WAXA LOO BAAHANYAHAY IN AAD KA QAADAY KALA SOOCIYADA CARTOGRAPHY
WAQTIGA WANAAGSIGA LAGU QAABILAYO IN AAD KA QAADAY MARKII LOO BAAHAN YAHAY MILITARIANKA IYO KA QAYBGALINTA WAXBARASHADA.
MR: MADAXWEYNAHA MADAXA LABO LAGU QAADO IN DIYAARINTA, WAA MAXAY DARYEEL CAAFIMAAD AH.
GOOBAHA SHIRKADAHA IGN, WAXAY YIRAAHAY MAYA.
Wax soo saarka TIME OF A caleen CARTOGRAFICA, waa saddex sano IYO TIME WAA BILOOD 6 SAX, tilmaamaya in DHICIN caleen KALIYA marka baxo dadweynaha iyo waa dhacsan.
Mariana Loaiza Usuga isagu wuxuu leeyahay:
Haa, sidee tahay? Waxaan la noolahay waalidkey, aad ayaan kuugu jeclahay Mariana